Suuq Weyn: Ka Fiiri Suuq Geynta | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 3, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qeyb weyn oo ka mid ah suuqgeynta ayaa ah awooda aad ku yeelan karto qulqulo aan dhammaad lahayn oo taageeraya dadkaaga, wax soo saarkaaga ama adeeggaaga. Dunida ganacsiga, wax waliba maalinwalba way isbadalaan - waxaan helnaa ganacsi cusub, waxaan horumarinaa alaabo cusub, waxaan bixinaa adeegyo cusub waxaanan helnaa macaamiil cusub. Dhacdo kastaa waxay bixisaa calaf aad u wanaagsan oo loogu talagalay waxyaabaha cusub!
Xaqiiqdii, habka kaliya ee looga bixi karo waxyaabo badan oo ku jira websaydhka shirkadaha waa in laga baxo dadka, alaabada, adeegyada ama macaamiisha. Taasi awooddo dhici oo waxay u badan tahay inay tahay calaamad wanaagsan in baloog ama wacyigelin kale oo suuq geyntu dhab ahaan ahayn meesha aad u baahan tahay inaad xoogga saarto!
Chris ayaa igu amaanay maanta inaan awoodo inaan sameeyo waxyaabo sida biyaha oo kale ah. Marwalba ma sahlana laakiin waa tan sida aan u sameeyo…
Sida Loo Dhejisto Mawduucyo Badan
Sababta aan uga dhamaado waxa ku jira ayaa ah in qoraalkayga uu daboolayo a ballaaran mowduucyo badan. Waxaan faallo ka bixin karaa ansaxinta foomka maalin, a buug in caajisay aniga xiga, sida loo sameeyo xisaabi masaafada PHP iyo MySQL iyo a Ka noqoshada WordPress maalin kale.
Kuwaas oo dhami waxay ku dhex yaalliin boqortooyada Teknolojiyada Suuqgeynta. Foomka Xaqiijinta ayaa ah dhammaadka hore, ama ugu muuqda, qayb ka mid ah barnaamijyada barnaamijyada ama degellada. Haddii aadan foomamka ka dhigi karin kuwo si fudud loo isticmaali karo oo aadan fiiro gaar ah u yeelan karin waayo-aragnimada isticmaalaha, waxay saameyn ku yeelaneysaa kalsoonidaada booska… natiijadaasna waxay saameyn ku yeelanaysaa Suuqgeyntaada - si aad uga adkaato aragtida ama aad uga gudubto.
Buug erey bixin ah? Hagaag, waa buug ku saabsan inta shirkadood ee si xawli ah u kora iyada oo aan la helin xogta taageerta ee sheegaysa inay tahay. The Black Swan. Taasi waa u muhiim suuqleyda, sax? Waa inay noqotaa!
Xisaabinta masaafada? Xagee ka imaanayaan macaamiishaadu? Haddii aad tafaariiqle tahay, waxaad si sax ah u ogtahay halka ay macaamiishaadu ka imaanayaan sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan inaad barato sida loo ogaado halka ay booqdayaashaadu ku sugan yihiin.
Iyo WordPress tweaking? Hagaag, boostada ayaa la macaamilaysa macaamiisha websaydhkaaga adoo siinaya waxyaabo laxiriira isla markaana bixiya habab habeynta mashiinka raadinta kuwa cusub.
Suuqgeyntu kaliya maahan Blog-yada Suuq geynta, Buugaagta iyo Shirarka
Haddii aad isweydiiso cidda Waaxda Suuqgeyntaadu maalmahan tahay, waxaad u baahan tahay inaad eegto wax ka baxsan jaantuska abaabulka. Qof kasta oo shirkaddaada ah laga bilaabo iibiyahaaga illaa wakiilkaaga adeegga macmiilka ayaa saameyn ku yeelan kara suuqgeyntaada in ka badan raggaas dhisaya joornaalada qurxoon. Waa waqtigii, Suuqgeeye ahaan, aad bilaabay inaad fiiro gaar ah u yeelato!
Ha i aaminin? Samee a Raadinta Google ee "Huntington Bank Nucks". Isku darka websaydh liita, taageero aad u xun iyo shaqaale qaboojiyey waxqabad la'aantu waxay ka dhigtay dusha sare ee Makiinadaha Raadinta! Sidee taasi ugu tahay suuqgeyn weyn?
Blogku diirada kuma saarin suuqgeynta
Waxaa jira liistada Blogs-ka Suuqgeynta ee ugu sarreeya oo leh wax soo saar wanaagsan shabakadda. Waan jeclahay liiska oo waan hubiyaa bil kasta. Bil kasta, balooggeygu kuma jiro. Bil kasta waxaan weydiiyaa sababta. Waxaan helay jawaabtayda maalmo ka hor… oo lagu sharaxay: balooggeygu diiradda kama saarin Suuqgeynta.
In kasta oo aan ka mahadcelinayo inay jiraan xuduudo adag oo waxa ku saabsan ka Blog Suuqgeynta waxaa lagu qeexay inay tahay, Waan ku faraxsanahay inaanan sameyn liiska! Haddii aad tahay Suuqgeeye waxa kaliya ee aad fiiro gaar ah u leedahay ay tahay shaqo kasta oo ka soo baxda waaxdaada, soo iibinta buloogyada, buugaagta iyo shirarka Lu Nasiib Wacan! Waxaad u baahan doontaa
Aniga ahaan Ma iga dhammaan doono Mawduuca waqti dhow!
Tags: gaadhista sumaddanatiijooyinka ganacsigacmoisgaarsiinta macaamiishaisbedelka googlegooldhalintaboggahagaha bulshadamuuqaalka bulshadalogin bulshadawadaagista bulshadagaadiidkaWordPress
Jan 6, 2008 saacadu markay ahayd 5:24 PM
Marka laga hadlayo “… riixista waxyaabo badan”, waxaan la kulmay dariiq ay mulkiilayaasha degelku ku heli karaan waxyaabo dheeraad ah adoo adeegsanaya howlaha raadinta horumarsan ee Google… waxay kuu ogolaaneysaa inaad bartilmaameedsato raadintaada si “xor ah loo isticmaalo, ganacsi ahaan, ama xitaa wax looga beddelo” waxyaabaha ku jira… .fiiq kaliya.